Kubuyekeziwe "Chevrolet-Niva" - kungashiwo, omunye izimoto elindelekile kunazo zonke onyakeni. abashayeli Russian Bengilokhu zenani umshini, izimpawu maneuverability okusezingeni eliphezulu. Hhayi-ke, yingakho olusha "Chevrolet-Niva" kulindeleke zalolu hlobo locingo. Ngale nje kwalokho, namanje kule ezikude 2002, kwakuqala ukwanda, futhi ukuba mikhulu.
Ngisho nezinye, izimoto ngaphambilini angakhishiwe "Chevrolet-Niva" zinezikhathi ezingeni eliphezulu ngokuthembeka nenduduzo. Yini ongayisho inguqulo ebuyekeziwe! intuthuko kwezobuchwepheshe akemi namanje, ukuze isibonelo ngenhla, uyabona ukuthi ushintsho kanye imodeli ngcono. Mayelana Suv e 2015 singasho into efanayo. Abakhiqizi ngokwabo inselele - ukwenza imodeli ibe namandla nakakhulu, eqinile futhi eqotho. Nokho, kumelwe ngivume - baba ngiyitholile.
Ngaphandle imoto ubukeka kuhle okuqinile. Kwemisipha, jikelele - ke iyamangalisa! Nokho, naphezu ukubukeka, kuba ukhululekile kakhulu futhi ethokomele. I onjiniyela wafaka eziningi umzamo ukwenza kube elula ngangokunokwenzeka. Kodwa Ingaphandle baba emincane ngaphezulu, futhi ithole nolaka, constricted, sengathi yokukhanya ezemidlalo, kanye umxhwele namasondo angu 16 inch. By endleleni, ngenxa imoto unqamule izwe yabo liye landa kakhulu. Lona sici yokuqala ehlukanisa olusha "Chevrolet-Niva".
Imodeli entsha nje kuphela babe passable xaxa futhi zikhululekile. Futhi ezingeni kakhulu anda sokuphepha. Abakhiqizi ngisho ukunikeza abathengi ezingaba ukuthenga isikhwama sezimo ezengeziwe zokuzivikela - njengenye indlela. Ziyini izinzuzo? Iqiniso lokuthi kule khithi ngaphezu kwalokho ivikela yokukhanya kanye injini. Ngenxa yalokho, imoto kuyinto ekahle ezihlukahlukene uhambo, ngisho ahlaselwe kabi ubhadane lwesifo off-road. Ngokuvamile, "Niva" iba imoto for "abantu abakhululekile."
Nalokhu liyindaba esemqoka. Yayiyini sokuvuselelwa "Chevrolet-Niva"? Photography usibonisa SUV, lapho bebona ukuthi umbono zisuka ukuthi le moto senziwa kubalandeli ukushayela fast and beqiniseka kakhulu off-road. Nokho, konke lokhu - Ingaphandle. Yiziphi izinguquko eziye bezingaphakathi imodeli? Enhanced phambi iphaneli, elula, ezenziwe kahle insimbi panel, okuyinto ongasebenza ngayo ngisho ngesivinini. Zonke izinkinobho zitholakala esebenza kahle kakhulu - limane ezingase zisikhiphe umbono yokushayela. Futhi, abakhiqizi abaningi baye bahlakulela izihlalo entsha - elula xaxa futhi zikhululekile.
Lokhu akulona nje ushintsho ukuthi usebhekene isibuyekezo "Chevrolet-Niva". Ngaphezu yonke ochwepheshe ngenhla iye yathuthuka ukwahlukanisa umsindo. Mangisho ukuthi izinguqulo ezandulele kwaba isici eziyinkinga. Nokho, onjiniyela basilungisa amaphutha, futhi manje emotweni buthule. Eqinisweni, i-abakhiqizi yezinkinga eziyinhloko kwaba umbono ukwakha imoto ngokuphelele ukhululekile lapho ukuthi isiphi isikhathi esikahle ukuhamba, kokubili ithrekhi futhi endleleni.
On the izici lobuchwepheshe
Awu, olusha "Chevrolet-Niva" 2015 ishintshile hhayi kuphela ngokoMthetho yangaphandle futhi ingaphakathi. Imininingwane nazo azinakiwe zishiywe. New "Chevrolet-Niva" 2015 ifakwe enamandla 136-amahhashi uphethiloli injini, okulingana 1.8 amalitha. Mangisho, kungcono izinjini ezinhle. Atmosphere, four cylinder, eyakhululwa ngaphansi EU8 ilebula. Indawo - okusemgqeni, 16 valve. Ngokuvamile, le mishini ekahle imoto enjalo, njengoba "Niva" entsha. By the way, zingabantu ngisho nokusatshalaliswa umjovo nophethiloli.
Transmission yamjabulisa ukuthi kukhona okuzenzakalelayo ozikhethela. Abaningi bakholwa ukuthi icebo ukumaketha - muva nje abantu abaningi bazimisele ukuthenga imoto akuyona ne Mechanics, kodwa "okuzenzakalelayo". Ochwepheshe ukweluleka ukuthenga version ne yokudlulisela inhlukano (5-ngesivinini). Noma kunjalo, i-SUV kuzenze zibathinte ejwayele lolu khetho.
Rumour has it ukuthi "Ensimini" entsha kuyogxilisa abalandeli babo hhayi kuphela yangaphandle futhi ingaphakathi, kodwa futhi ekuphatheni. Abakhiqizi sewenze yonke imizamo yokuthuthukisa yayo ukusebenza ukushayela. Bathi baphumelela. Off-road, badedelane, isimo sezulu esibi, engalingani - konke lokhu imoto Kulula ukuzinqoba. Endleleni liziphatha esihle nje - yonke ephendula touch of umshayeli ukuba amasondo ayo. Phatha umshini ezinjalo - Kujabulisa ngempela. Ngokuvamile, "Ensimini" esisha - iyona moto ephelele Labo abasiqaphelayo ride ukhululekile futhi awahluphi. Akubuzwa, yingakho uye abe ukusetshenziswa ngakho ukushayelwa athandwa kusukela eminyakeni yokuqala yokukhishwa kwayo.
Kuyaphawuleka ukuthi inguqulo ebuyekeziwe imoto "Chevrolet-Niva" akazange ukudanisa ngetetsamelilwati abagxeki ngaphezulu. Abaningi zazingathandi yesikhulumi ecashile. Sasicabanga ukuthi iyiphi inguqulo endala zizosetshenziswa. Nokho, kukhona. Weza out entsha ngokuphelele. Abakhiqizi baye wahlomisa ukumiswa yalo engaphansi misa, kanye phambi ezimele. Ngisho version eziyisisekelo angaya idrayivu wonke-wheel nge ezimbili isigaba "razdatkoy". Plus, kufanele ukunakwa waphawula yokubakhona inter-oluvala amasondo ukukhiya umehluko. Futhi permeability eliphezulu umshini abakwazi kodwa jabulani. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi ugcine ngenxa yokuthi ukuthi onjiniyela sewenze overhangs esifushane futhi amabhampa ezitshekile. By endleleni, futhi izinga lenyuke sokuphepha - konke nge umzimba okunokwethenjelwa nge ukuqiniswa.
By the way, umenzi uhlela ukwakha inguqulo ezisemadolobheni lokhu model. Onjiniyela ucabanga ukwenza imoto phambili isondo kubalandeli of "Niva", ningathandi une-SUV, kodwa okuthile okuncane nesizotha more futhi kancane ntathu.
Futhi ekugcineni - mayelana intengo. Imodeli kuyoba isendalini ekuqaleni olandelayo, ngo-2016. Kuze kube manje, intengo akukabonakaliswa yomphakathi, kodwa mhlawumbe abantu abafuna ukuthenga lokhu imoto, kuyodingeka bakhokhe ukuze ruble wakhe angaba yizinkulungwane 500. Kungenxa iphakethe eyisisekelo.
Car "Nissan Qashqai" (2016) libuyekeza abanikazi
Lokho imvelo awuniké indoda? Anganikeza imvelo?
Kungani okungukuthi ishisa kakhulu ehlobo kanye abandayo ebusika?